UNdunankulu uthembisa imithetho eqinile ebhekene nobushokobezi - Bayede News
UNdunankulu waseNew Zealand uJacinda Ardern uthembise ngoMgqibelo ukuthi uzoqinisa imithetho yokulwa nobushokobezi kule nyanga ngemuva kokuba isosha ebeliphethe ummese elaziwa yiziphathimandla ligwaze lalimaza abantu abayisikhombisa esitolo.
Amaphoyisa adubule abulala lomhlaseli oneminyaka engama-32 ubudala, ongowokudabuka eSri Lanka owayelahlwe yicala waboshwa cishe iminyaka emithathu ngaphambi kokuba adedelwe ngoNtulikazi, ngemuva kwesikhashana eqalise lesi sigameko sokugwaza ngoLwesihlanu.
UNdunankulu u-Ardern uthe phambilini le ndoda ibigqugquzelwa yiqembu lamaSulumane futhi ibigadwa njalo kodwa umthetho wawungasakwazi ukuyigcina ejele.
“Ngiyazibophezela, ukuthi ngokushesha nje lapho iPhalamende liqala kabusha, sizowuqedela lowo msebenzi okusho ukuthi sisebenzela ukwedlulisa umthetho ngokushesha okukhulu, futhi kungakapheli le nyanga,” kusho u-Ardern esithangamini nabezindaba.
UMthethosivivinywa Onqanda Ubushokobezi (Counter Terror Legislation Bill) wenza kube yicala ukuhlela nokulungiselela okungase kuholele ekuhlaselweni ubuphekula,